PlexEarth - पृष्ठ २ - Geofumadas
Plex.mark! यो गुगल अर्थ एक्टिभएक्समा बनेको विकास हो, जुन यूटीएममा सिधा अपरेसनको लागि सुविधा पुर्‍याउँछ, केवल समन्वयहरू प्राप्त गर्न मात्र प्रवेश गर्नका लागि पनि। सित्तैंमा छ Plex.mark स्थापना गर्नुहोस्! यो Plescape, Plex.Earth औजारहरु को ग्रीक निर्माता बाट डाउनलोड गर्नु पर्छ; यसलाई स्थापना पछि, सर्टकट डेस्कटपमा सिर्जना हुन्छ। को लागि ...
Google धरती KML PlexEthth